Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Happy Valentines: voninkazo 13,000 taonina nalefa tany Ekoatera
Raiki-pitia tamin'i Ekoatera ny Kolombiana ary afaka namonjy ny vondrona LATAM
Ny LATAM Cargo Group dia nanana fampisehoana tsara nandritra ny vanim-potoanan'ny Andron'ny 2021, miaraka amin'ny Fetin'ny Reny (Aprily sy Mey) izay tampon'ny asa fanondranana voninkazo vaovao. Tamin'ny 2021, ny orinasa dia nitondra voninkazo 7% bebe kokoa noho ny tamin'ny 2020, izay mitotaly 13,200 XNUMX taonina mahery.
Ireo tarehimarika tsara dia noho ny fiasan'ny LATAM Group tsy tapaka tao Kolombia sy Ekoatora, na eo aza ny fanamby lehibe napetraky ny valan'aretina COVID-19 raha ny fahaizany no jerena. Raha ny marina, nampitombo ny tolotra an-tserasera ny Vondrona mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifany - amin'ity tranga ity ireo mpamokatra voninkazo– izay miankina amin'ny fifandraisana sy ny fanondranana hanohanana ny orinasany.
Ohatra, nandritra ny vanim-potoana izay nanomboka telo herinandro talohan'ny andron'ny mpifankatia – 18Janoary hatramin'ny 09 febolay– ny vondrona LATAM dia niainga in-225 tany Bogota, Medellin ary Quito niaraka tamin'ny raozy, raozy famafazana, alstroemeria ary gerberas avy any Kolombia, ary raozy , gypsophila ary alstroemeria avy any Ekoatera mankany Etazonia.
Miami no toerana itaterana ny voninkazo vaovao ary iray amin'ireo foibem-panomezana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao koa sy trano ipetrahan'ny entan'ny LATAM Airlines Group. Manomboka eto, ny voninkazo dia zaraina voalohany mankany Amerika Avaratra sy Eropa.
Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mahazatra, ny orinasa dia nitondra 7% taonina isan-kerinandro tany Kolombia nandritra ny vanim-potoanan'ny Andron'ny Mpifankatia, nanatanteraka tamim-pahombiazana ny fangatahana avy amin'ny sehatry ny voninkazo.
Tao Quito, Ekoatera, ny fahaiza-manao dia nampidirina hitaterana ny famokarana voninkazo ho any Miami, nampitombo ny taonina isan-kerinandro 7%, ary nampiakatra ny fahafaha-nakany Amsterdam (The Netherlands), ny toerana faharoa ho an'ireo voninkazo Ekoatoriana.
“Amin'ny fotoan'ny fahasahiranana toy ny areti-mifindra amin'izao fotoana izao dia aseho ny fanoloran-tenantsika ho an'ny mpanjifantsika. Tsy vitan'ny hoe manolotra ny safidy fitaterana tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ny fampiasana fiaramanidina enta-mavesatra rehetra ary manampy fiaramanidina mpandeha ho fitaterana voninkazo fotsiny. Nanisy fatra hafa koa izahay handraisana voninkazo vaovao avy any Kolombia sy Ekoatera amin'izao tontolo izao, ka hanohana ny orinasan'ny mpanjifanay, ”hoy ny fanamarihana nataon'i Claudio Torres, filoha lefitra amerikanina atsimo ao amin'ny LATAM Cargo Group.
Raha mamokatra amin'ny faritra samihafa manerana ny firenena ny voninkazo, any Kolombia ny faritr'i Cundinamarca akaikin'i Bogota dia mitaky 76% an'ity simba ity, arahin'i Antioquia miaraka amin'ny 24%.
Any Ekoatera, ny faritra mpamokatra lehibe dia i Pichincha sy ny faritra inter-Andean ao Cotopaxi.
Auckland, Nouvelle-Zélande ao Lockdown: Nampandrenesina ny seranam-piaramanidina